I-formwork yensimbi yakhiwe ngepuleti lobuso bensimbi elinezimbambo ezakhelwe ngaphakathi nama-flange kumamojula avamile.Ama-flange abhoboze izimbobo ngezikhathi ezithile ukuze kuhlanganiswe i-clamp.
I-formwork yensimbi iqinile futhi ihlala isikhathi eside, ngakho-ke ingasetshenziswa kabusha izikhathi eziningi ekwakheni.Kulula ukuhlanganisa nokubeka.Ngomumo nokwakheka okungaguquki, kufaneleka ngokwedlulele ukufaka isicelo esakhiweni okudingeka kuso inani elikhulu lesakhiwo esimise okufanayo, isb. Isakhiwo esiphakeme kakhulu, umgwaqo, ibhuloho njll.
I-Precast girder formwork inezinzuzo zokunemba okuphezulu, isakhiwo esilula, i-retractile, ukubunjwa okulula nokusebenza okulula.Ingakhushulwa noma ihudulelwe endaweni yokuphonsa ngokuhlangene, futhi idilizwe ngokuphelele noma isiqephu ngemva kokuthola amandla ukhonkolo, bese ikhipha isikhunta sangaphakathi kubhande.Kuyasiza ukufaka nokulungisa iphutha, ukushuba okuphansi kwabasebenzi, nokusebenza kahle okuphezulu.
I-formwork yethebula iwuhlobo lwe-formwork eyayisetshenziselwa ukuthululela phansi, esetshenziswa kabanzi esakhiweni esiphakeme, isakhiwo sefekthri enamazinga amaningi, isakhiwo esingaphansi komhlaba njll.
Ngokuhlanganisa lezi zicaciso ezintathu, umsebenzi wefomu lekholomu eyisikwele ungaqedela isakhiwo sekholomu eyisikwele ubude obuseceleni obusuka ku-200mm ukuya ku-1000mm wezikhawu ezingu-50mm.
I-Lianggong Plastic Slab Formwork iwuhlelo olusha lwezinto ezibonakalayo olwenziwe nge-ABS nengilazi yefayibha.Ihlinzeka ngezindawo zephrojekthi ngokumiswa okulula ngamaphaneli wesisindo esilula ngakho kulula kakhulu ukuwaphatha.Kuphinde konga izindleko zakho kakhulu uma uqhathanisa nezinye izinhlelo ze-formwork material.
Amabhokisi omsele asetshenziswa ekugezeni imisele njengendlela yokweseka umhlabathi womsele.Banikezela ngesistimu yomugqa womsele ongasindi ongasindi.